ईमेल मरिसक्यो? जेनी र जेन्नेनलाई त्यो नभन्नुहोस् Martech Zone
शुक्रवार, अक्टुबर 29, 2010 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 Douglas Karr
प्रत्येक चोटि एक पटक तपाईले गनगन सुन्नुहुन्छ ... ईमेल मरिसकेको छ। सामान्यतया यो मान्छेहरु बाट अप्ठ्यारो हुन्छ जुन ईनबक्स-चुनौती र कहिल्यै राम्रोसंग तिनीहरूको ईमेल प्रयास मुद्रीकरण गरिएको छैन। ईमेल मृत देखि टाढा छ ... र प्रमाण व्यवसाय जस्तै छ इन्डी दर्शक.
इन्डी स्पेक्टर केवल एक ईमेल आधारित कम्पनी हो। उनीहरु प्रतिभाशाली लेखकहरु लाई रोजगार मा ईण्डियानापोलिस मा चलिरहेको को बारे मा विशेष कथा बताउन। जेनी एडवर्ड्सले अन्य बजारहरूमा यो विचार हेरे र उनी आफैंमा एक अतुलनीय नेटवर्कर भएकी थिइन, उनीले जेनेन ब्लेभिन्ससँग मिलेर यो अविश्वसनीय सफल स्टार्टअप सिर्जना गरे। अप्रिल देखि, तिनीहरूले आफ्नो ग्राहक सूची डबल सात पटक देखेका छन्!
उनीहरूको सहयोगमा हालसालै पुनःब्रेन्ड गरिएको छ क्रिस्टियन एन्डरसन + एसोसिएट्स (विश्व मा एक उत्तम ब्राण्ड अनुभव कम्पनीहरु को एक ... र Janneane मा नियोक्ता)। न्युजलेटर सामग्रीको कारण पहिले नै शानदार थियो ... तर अब डिजाइनले सामग्री समातेको छ:
मेरो कुरा के हो? यस प्रकारको सन्देश ल्याउन ईमेल भन्दा राम्रो कुनै मध्यम छैन। यो विशेष हो, यो निजी हो, र यो उत्तम छ। एक ब्लग एक महान माध्यम हो, तर सबैको लागि प्रसारण सामग्री फरक मा राख्दछ, र उपभोग वा समान तरीकाले प्रतिक्रिया हुने छैन। सामग्रीको पर्यायवाची ब्रान्ड डिजाईन गर्दा यसले सबै अधिक उत्तम बनाउँछ ... यो ईमेल जाँच गर्नुहोस्!
मायाको लागि धन्यवाद डग! नोटको रूपमा मात्र - हाम्रो वेबसाइट नयाँ ब्रान्डि yetको साथ फेरि सुरू गरिएको छैन ... छिटै हुनुपर्दछ र जोएटोग्राफीबाट केही उत्कृष्ट फोटोहरू KA + A डिजाईनमा सम्मिलित गरिएको छ - गौरवशाली!
नोटको रूपमा - हामी स्टार्टअप स्पेक्टेटर पनि शुरू गर्दै छौं इन्डीको वरिपरि समाचारहरू कभर गर्न ... यो पनि उत्तिकै शानदार हुनेछ!
फेरी धन्यबाद - ईमेल मरेदेखि टाढा छ!